ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ချီးမြင့်ခံရ | Mizzima Myanmar News and Insight
မြန်မာနိုင်ငံမှ ယူကေသို့ မိုင်...
အဓမ္မခိုင်းစေမှု ပပျောက်ရေး အမ...
သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေနှင့် တ...
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၅ ။ ။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို ချင်းပြည်နယ်တီးတိန် (ဇိုမီး) အဖွဲ့မှ ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့(Gal Hang Pah Tawi Na Award) ကိုချီးမြင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး Rev.Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့သည် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ၊ ဧည့်ခန်းမဆောင်တွင် ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်နေ့က သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး အဆိုပါဘွဲ့ကို ချီးမြင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်မှ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အား ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ ပေးအပ်ရခြင်းမှာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲ နေသည့်ကာလတွင် တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက်ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ မိမိတိုင်းပြည်အတွက် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ကာကွယ်ပေးခြင်းတို့အပြင် ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသော တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် အသက်နှင့် လဲ၍ကာကွယ်သည့် အရည်အချင်းပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်း စသည့်အချက်သုံးချက်နှင့် ကိုက်ညီသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း တပ်မတော်မှ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။
ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ချီးမြင့်ပြီးနောက် ဘုန်းတော်ကြီး Rev.Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung က “ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲဲ့ (Gal Hang Pah Tawi Na Award) အား တပ််မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံ ပေးအပ်နိုင်သည့်အတွက် များစွာဝမ်းမြောက်ရကြောင်း၊ ယနေ့သည် ချင်းတိုင်းရင်းသားများအတွက် သမိုင်း စာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့ဖြစ်ပါကြောင်း” ပြောဆိုခဲ့သည်။
အဆိုပါ ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲဲ့ (Gal Hang Pah Tawi Na Award) သည် မြောက်ပိုင်းချင်းတိုင်းရင်းသားများ၏ အမြင့်ဆုံးသူရဲကောင်းဘွဲ့ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို ပေးအပ်ခဲ့သော ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ဓားမှာ ချင်းတိုင်းရင်းသား သူရဲကောင်းများကိုင်ဆောင်ခဲ့သည့် ဓားနှင့်ပုံစံတူပြုလုပ် ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ပေးအပ်ပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းနောင်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိများတက်ရောက်ကြပြီး ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်(ဇိုမီး)အဖွဲ့မှ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး Rev.Fr. Joseph Thang Nen Zo Mung နှင့်အတူ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး Rev. Fr. Thang Muan Lian၊ နှစ်ခြင်းသင်းအုပ်ဆရာများနှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြကြောင်းလည်းသိရသည်။